कार्बनिक यातायात ट्रिपल गर्न हामीले के गर्यौं Martech Zone
कार्बनिक यातायात ट्रिपल गर्न हामीले के गर्यौं
बिहीबार, अक्टुबर 30, 2014 शनिबार, जनवरी 14, 2017 Douglas Karr
पछिल्लो वर्ष एक भएको छ जहाँ हामी ग्राहकहरुमा अथक परिश्रम गर्दै छौं ... यति धेरै कि हामी प्राय जसो हाम्रो आफ्नै फिर्ता यार्डलाई बेवास्ता गरिरहेछौं। Martech Zone दश बर्ष भन्दा बढि केहि हजार ब्लग पोष्टको साथ एक महत्वपूर्ण प्रकाशन हो। हामीले होस्टिंग सार्‍यौं, विषयवस्तु धेरै पटक परिवर्तन गर्यौं, हाम्रो प्लगइनहरू जहिले पनि परिमार्जन गर्‍यौं, र कहिलेकाँहि अविश्वसनीय र्या .्कि had र अरूमा नराम्रो रेटिंग पाएका छौं।
एकदम इमान्दारीपूर्वक, मैले खोजमा धेरै ध्यान दिएन किनकि हामीसँग केहि राम्रा रैंकिंगहरू र उत्साही श्रोताहरू थिए जुन ईमेल, मोबाइल अनुप्रयोग, पोडकास्ट र भिडियो द्वारा सदस्यता लिएको थियो। तर हामी आउँदै गरेको डिजाइन परिवर्तनको लागि तयारीका लागि विगत केही महिनाहरूमा साइटमा अथक प्रयास गरिरहेछौं, हामीले देख्यौं कि परिवर्तनले हामीले गरिरहेको परिवर्तनले साइटको श्रेणीमा धेरै हजार कुञ्जीशब्द संयोजनमा ठूलो प्रभाव पारेको छ। - धेरै धेरै प्रतिस्पर्धी।
हामीले क्रमशः साइटलाई अनुकूलन गर्न सकेनौं र स्तर अनुगमन गर्नुहोस्, त्यसैले कुन संयोजन वा एकल चीजले सब भन्दा बढी प्रभाव पारेको मँ भन्न सक्दिन। म तपाईंलाई मात्रै बताउन सक्छु कि यी सबै चीजहरू गरिसकेपछि, हाम्रो र्या sky्क आसमान छ। म निश्चित छु कि तिनीहरू मध्ये केहीले फरक पारेनन्, तर म यो तथ्याical्किक निश्चितताका साथ भन्न सक्दिन। त्यसो भए - म क्रममा परिवर्तनहरू साझा गर्दछु जुन म विश्वास गर्दछु जुन सब भन्दा फरक भयो।
लिंक अस्वीकार गर्नुहोस् - नराम्रो ब्याकलिks्कहरू जहिले पनि यसको मतलब यो हुँदैन कि तपाइँ डे-अनुक्रमित हुनुहुन्छ, यसले सजिलै पछाडि समात्न सक्छ। हामीले प्रयोग गरेर ब्याकलिink्क अडिट गर्‍यौं लिंक डेटोक्स र साइटहरूमा सबै लिंकहरू वेवास्ता गरियो जुन स्केची देखा पर्‍यो र एक टन आउट आउटबाउन्ड लिंकहरू थिए।
सुरक्षित प्रमाणपत्र - हाम्रो साइट अब सुरक्षित भएको छ SSL प्रमाणपत्र स्थापना गरियो र हजारौं पोष्टहरूमा कार्य गर्दै जुन असुरक्षित स्रोतहरूबाट सामग्री सम्मिलित थियो।
स्थिर डुप्लिकेट शीर्षक - हामीसँग हाम्रो वर्तमान थिमको साथ एक ठूलो समस्या थियो र नक्कल शीर्षक ट्यागहरू साइट भरमा खराब पेजिनिसनको साथ। पेजिनेसनले हरेक पृष्ठ गरिएको नतिजामा उही शीर्षक प्रदान गर्‍यो। म महिनौं को लागि मुद्दा को बारे मा थाहा थियो तर यसलाई ठीक गर्न को लागी सकेको छैन किनकि यसले हाम्रा पाठकहरुलाई असर गरीरहेको छैन (धेरै व्यक्तिहरु पृष्ठांकन लिंकमा क्लिक गर्दैनन्)।
छवि कम्प्रेसन - हामी एक तैनात छवि कम्प्रेसन समाधान साइटमा। हामीले साझा गर्ने सबै इन्फोग्राफिक्सको साथ, हाम्रा केही फाइल आकारहरू विशाल थिए र वास्तवमा पृष्ठहरू लोड गर्न एकदमै ढिलो भयो।
हटाइएको पृष्ठ Sculpting - हामी साइटमा लगभग प्रत्येक आउटबाउन्ड लिंक र धेरै नेभिगेसन एलिमेन्टहरू खोतिरहेका थियौं। मैले हाम्रो विज्ञापनको अपवाद सहित सबै नफोलो एट्रिब्यूटहरू हटाईदिएँ।
कम स्क्रिप्ट र CSS अनुरोधहरू - यो एक धेरै टाढा छ, तर हामीसँग केही प्लगइनहरू थिए - हाम्रो मुख्य मेनू सहित - जसमा धेरै स tons्क्रिप्ट र CSS अनुरोधहरू थिए। हामीसँग अझै एउटा टन छ जुन म घनघ्न खोज्दै छु, तर अब हामीसँग आधा अनुरोधहरू छन् जुन तपाईं पृष्ठ लोड गर्नुहुन्छ।
वयस्क सामग्री हटाइयो - हामीसँग टेक्नोलोजीमा टन्स लेख छ जुन अब अवस्थित छैन। हामीले साइटमा हाम्रो समग्र पोष्टहरूको संख्या गत बर्षमा १,००० भन्दा बढि पोष्टहरू घटाएका छौं। अधिक सँधै राम्रो हुँदैन - विशेष गरी जब तपाईंसँग धेरै सामग्री हुन्छ जुन ध्यान पाउँदैन। कुनै सामाजिक साझेदारी नभएको पोष्टहरू, कुनै ब्याकलिks्क वा टेक्नोलोजीको बारेमा पोष्टहरू छैन जुन हटाइएको छ।
मद्दतको लागि हामी के गर्दैछौं?
माथिको कामको बारेमा राम्रो कुरा भनेको हो- साइटलाई नहेर्ने र सुरक्षित गर्नु बाहेक - सब भन्दा कडा कामले साइटमा पाठकको अनुभवलाई सुधार गर्दै थियो। अर्को हामी पछाडि जाँदैछौं र प्रत्येक पोस्टको राम्रो गुण भएको छवि छ कि छैन भनेर पक्का गर्दैछौं र हामी पुरानो पोष्टहरू साझा गरिरहेका छौं जुन अझै प्रासंगिक छ - सामग्रीको अधिकारलाई सुदृढ पार्नको लागि उनीहरूमा ध्यान दिनको लागि प्रयास गर्दै हामी प्रयास गरिरहेका छौं!
जब म यी सबै कार्यहरूमा विश्वस्त छु, त्यहाँ सधैं टाढाको सम्भावना हुन्छ कि अन्य साइटहरू जुन हामीले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका थियौं एल्गोरिथ्म अपडेटको साथ पनि पटक पटक प्राप्त भयो!
२०१ H हलिडे सीजनको लागि यहाँ तपाईंको ईमेल सुझावहरू छन्
सबैभन्दा धेरै संलग्न सामग्री कोटी कोटीहरू अनलाइन र मोबाइल के हुन्?
जोन जे वाल
यो तपाईको पैसाको लागि केहि द्रुत ब्यांग प्राप्त गर्नको लागि उत्कृष्ट सूची हो - यो पूर्ण रूपमा चोर्दै। भर्खरै सुरु गर्ने मानिसहरूका लागि म थप्छु: यदि तपाईंले विगत केही महिनाहरूमा गर्नुभएको छैन भने तपाईंको Google वेबमास्टर उपकरणहरूमा गहिरो खन्नुहोस्।
पोस्ट डग को लागी धन्यवाद। के तपाई न-फलो लिङ्कहरूको बारेमा थप कुरा गर्न सक्नुहुन्छ? हामीले धेरै जसो बाह्य लिङ्कहरूलाई पनि फलो नगर्ने अभ्यास गरेका छौं, वा ब्लग वास्तवमा के थियो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्न मद्दत गर्नको लागि प्रति पोस्ट संख्यालाई धेरै घटाउने अभ्यास गरेका छौं, तर तपाईंले माथि भन्नुभएको कुराको आधारमा, हामीले हाम्रा अभ्यासहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ?
मत्ती Cutts यस भिडियोमा nofollow मा थप अन्तर्दृष्टि प्रदान गरेको छ जसले मलाई मेरो आफ्नै परिवर्तन गर्न नेतृत्व गर्यो। म विश्वास गर्थे कि पछ्याइएको लिङ्कहरू मेरो साइटमा "प्वालहरू" जस्तै थिए जहाँ म स्रोतहरूमा अधिकार खन्याइरहेको थिएँ। मेरो व्यक्तिगत राय अब यो हो कि Google लाई थाहा छ कि गन्तव्य साइट सान्दर्भिक छ वा छैन र क्रेडिट योग्य छ। यदि तपाइँ nofollow को साथ सबै कुरा क्राफ्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने, म निश्चित छु कि गुगललाई थाहा छ कि तपाइँ केवल प्रणाली खेल्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ वा छैन। फेरि, मलाई लाग्छ कि विज्ञापनहरूमा सधैं गुगलको सल्लाह अनुसार हुनुपर्छ। अरू सबै, म अब यति विश्वस्त छैन। आशा छ कि मद्दत गर्छ! तपाईं सधैं परीक्षण र हेर्न सक्नुहुन्छ! तिनीहरूलाई हटाउनुहोस् र के हुन्छ हेर्न केही हप्ता पर्खनुहोस्!